Saturday February 20, 2016 - 11:04:37 in Sawirada is bedbedelaya by Super Admin
Jimciyadda Gargaarka Aadaminimada, Waxbarashada iyo Hormarinta ee SOHEDA, ayaa waxa ay howlaheeda sama-falka ah gacan siin uga heshaa dhinacyo isugu jira hay'ado, shakhsiyaad samafalayaal ah, aqoon-yahanno, iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad
Jimciyadda Gargaarka Aadaminimada, Waxbarashada iyo Hormarinta ee SOHEDA, ayaa waxa ay howlaheeda sama-falka ah gacan siin uga heshaa dhinacyo isugu jira hay'ado, shakhsiyaad samafalayaal ah, aqoon-yahanno, iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, kuwaas oo tan iyo markii jimciyadda la dhisay qayb ka ahaa dhammaan dadaalada wax u qabashada dadka danta yar ee ay SOHEDA hormuudka ka tahay. Dhinacyadan u taaggan gacan siinta Jimciyadda SOHEDA, ayaa waxa ay si joogto ah u bixiyaan kaalmooyin lagu socodsiinayo barnaamijyada hormarinta waxbarashada iyo aadaminimada ee ay jimciyaddu ku caawiso dadka saboolka ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la kulma takoorka hayb sooca ku dhisan ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ku faafsan. Sida aan warbixinno horay loogu daabacay shabakaddan ugu soo bandhignay, waxa ay shakhsiyaadkan qaarkood dusha u riteen mas'uuliyadda nolosha iyo wax-barashada qaar ka mid ah caruurta agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la hayb sooco ee ay SOHEDA gacanta ku hayso. Waxana ay damaanad qaadka mas'uuliyadda caruurtaasi suurtagalisay in ay helaan wax-barasho iyo nolol wannaagsan oo aanay abid horay ugu helin. Warbixin ayaa waxa aan ku soo bandhigi doonnaa magacyada qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay kaalmadoodu muhiimka u tahay socoshada howlaha SOHEDA, annaga oo doonayna in aan xusno kaalintooda, kuna boogaadino oo ku amaanno gacan siinta iyo garab istaagga ballaaran ee ay u fidiyaan jimciyadda si looga guul gaaro howlaha samafalka ee aan wadno. Guddoomiyayaasha 17-ka degmo ee gobalka Banaadir ayaa qayb ka ah shakhsiyaadka aan kor ku soo xusnay ee sida hagar la'aanta ah u taageera SOHEDA, waxana mid waliba oo guddoomiyayaashan ka mid ah uu ballan qaaday bixinta lacag gaaraysa 500 oo dollar, taas oo loogu tala galay socodsiinta howlaha samafalka ah ee ay jimciyaddu fuliso. Waxa aan mahad ballaaran u celinaynaa dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka gobalka Banaadir oo magacyadooda iyo sawiradoodu ay hoos ka muuqdaan, waxana rajaynaynaa in taageeradoodu ay suurta gelin doonto in guulo waa wayn laga soo hooyo howlaha samafalka iyo hormarinta ee ay SOHEDA u qabato dadka u baahan. 1. Cumar Mayre Macow: Guddoomiyaha degmada Dharkiinley 2. Guddoomiyaha degmada Wadajir: Axmed Cabdulle Afrax 2. 3. Guddoomiyaha degmada Waaberi: Xaawa Maxamed Cali 4. Guddoomiyaha degmada Xamar Jajab: Axmed Cusmaan Dhoorre 5. Guddoomiyaha degmada Xamar-Wayne: Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir 6. Guddoomiyaha degmada Shingaani: Axmed Xassan Yalaxow 7. Guddoomiyaha degmada Cabdicasiis: Cusmaan Muxudiin Cali 8. Guddoomiyaha degmada Kaaraan: Cabdifataax Nuur Cali 9. Guddoomiyaha degmada Shibis: Axmed Muumin Maxamed 10. Guddoomiyaha degmada Boondheere: Qaasin Cabdullaahi Xassan 11. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda: Yaasiin Ciise Nuur 12. Guddoomiyaha degmada Howl-wadaag: Ciise Maxamuud Guure 13. Guddoomiyaha degmada Hodan: Axmed Salaad Ibraahim 14. Guddoomiyaha degmada Dayniile: Axmed Nuur Cabdi Siyaad 15. Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid: Cusmaan Maxamed Caddaawe 16. Guddoomiyaha degmada Hilwaa: Maxamed Axmed Xaashi 17. Guddoomiyaha degmada Kaxda: Cabdikamaal Shiikh Xersi Jimciyadda Gargaarka Aadaminimada, Waxbarashada iyo Hormarinta ee SOHEDA, ayaa waxa ay howlaheeda sama-falka ah gacan siin uga heshaa dhinacyo isugu jira hay'ado, shakhsiyaad samafalayaal ah, aqoon-yahanno, iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, kuwaas oo tan iyo markii jimciyadda la dhisay qayb ka ahaa dhammaan dadaalada wax u qabashada dadka danta yar ee ay SOHEDA hormuudka ka tahay.
Dhinacyadan u taaggan gacan siinta Jimciyadda SOHEDA, ayaa waxa ay si joogto ah u bixiyaan kaalmooyin lagu socodsiinayo barnaamijyada hormarinta waxbarashada iyo aadaminimada ee ay jimciyaddu ku caawiso dadka saboolka ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la kulma takoorka hayb sooca ku dhisan ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ku faafsan.
Sida aan warbixinno horay loogu daabacay shabakaddan ugu soo bandhignay, waxa ay shakhsiyaadkan qaarkood dusha u riteen mas'uuliyadda nolosha iyo wax-barashada qaar ka mid ah caruurta agoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaha la hayb sooco ee ay SOHEDA gacanta ku hayso. Waxana ay damaanad qaadka mas'uuliyadda caruurtaasi suurtagalisay in ay helaan wax-barasho iyo nolol wannaagsan oo aanay abid horay ugu helin.
Warbixin ayaa waxa aan ku soo bandhigi doonnaa magacyada qaar ka mid ah shakhsiyaadka ay kaalmadoodu muhiimka u tahay socoshada howlaha SOHEDA, annaga oo doonayna in aan xusno kaalintooda, kuna boogaadino oo ku amaanno gacan siinta iyo garab istaagga ballaaran ee ay u fidiyaan jimciyadda si looga guul gaaro howlaha samafalka ee aan wadno.
Guddoomiyayaasha 17-ka degmo ee gobalka Banaadir ayaa qayb ka ah shakhsiyaadka aan kor ku soo xusnay ee sida hagar la'aanta ah u taageera SOHEDA, waxana mid waliba oo guddoomiyayaashan ka mid ah uu ballan qaaday bixinta lacag gaaraysa 500 oo dollar, taas oo loogu tala galay socodsiinta howlaha samafalka ah ee ay jimciyaddu fuliso.
Waxa aan mahad ballaaran u celinaynaa dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka gobalka Banaadir oo magacyadooda iyo sawiradoodu ay hoos ka muuqdaan, waxana rajaynaynaa in taageeradoodu ay suurta gelin doonto in guulo waa wayn laga soo hooyo howlaha samafalka iyo hormarinta ee ay SOHEDA u qabato dadka u baahan.
1. Cumar Mayre Macow: Guddoomiyaha degmada Dharkiinley
2. Guddoomiyaha degmada Wadajir: Axmed Cabdulle Afrax
3. Guddoomiyaha degmada Waaberi: Xaawa Maxamed Cali
4. Guddoomiyaha degmada Xamar Jajab: Axmed Cusmaan Dhoorre
5. Guddoomiyaha degmada Xamar-Wayne: Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir
6. Guddoomiyaha degmada Shingaani: Axmed Xassan Yalaxow
7. Guddoomiyaha degmada Cabdicasiis: Cusmaan Muxudiin Cali
8. Guddoomiyaha degmada Kaaraan: Cabdifataax Nuur Cali
9. Guddoomiyaha degmada Shibis: Axmed Muumin Maxamed
10. Guddoomiyaha degmada Boondheere: Qaasin Cabdullaahi Xassan
11. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda: Yaasiin Ciise Nuur
12. Guddoomiyaha degmada Howl-wadaag: Ciise Maxamuud Guure
13. Guddoomiyaha degmada Hodan: Axmed Salaad Ibraahim
14. Guddoomiyaha degmada Dayniile: Axmed Nuur Cabdi Siyaad
15. Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid: Cusmaan Maxamed Caddaawe
16. Guddoomiyaha degmada Hilwaa: Maxamed Axmed Xaashi
17. Guddoomiyaha degmada Kaxda: Cabdikamaal Shiikh Xersi